नारीकै पक्षमा डम्फु - डा. कृष्णबहादुर रानामगर - Everest Uncensored
पाठक मञ्चमा साँखुकी लुमन्ती श्रेष्ठले लेख्नुभएको ‘लौ सुनौं कारुणिक आवाज’ -२७ मंसिर) शीर्षक लेख पढ्दा म कलम समाउन बाध्य भएँ ।
‘जग्गा बेचेर खान नपुगेपछि मेरो कपडासमेत बेच्न बाँकी राखेनन्’ भनेर उहाँले तारा आचार्यको ब्यथा लेख्नुभएको रहेछ । तर गुल्मीकी ५७ वषर्ीया खिमकुमारीले अत्यधिक मादक पदार्थ सेवन गरी काठको आग्लोले हानेर श्रीमान् मानबहादुर सिंजालीलाई खुत्रुक्कै पारेको तथ्य लेख्न किन बिर्सनुभएको ? रक्सी, गाँजा सेवन गर्ने पतिलाई ‘बौलाहा दानवीय चरित्र’ को संज्ञा दिने लेखिकासँग मेरो प्रश्न छ- ‘मादक पदार्थ सेवन गरेर आफ्नो पतिलाई सीधै यमराजकहाँ पठाइदिने पत्नीलाई के संज्ञा दिनुपर्ला ?’ घरपरिवारमा हिंसा र आतंक मच्चाउन श्रीमतीहरू श्रीमान्भन्दा कम छैनन् ।
आफ्नै अफिसमा हराएको सामान खोज्दै जाँदा गंगारामको टेबुलमा पुगेँ । खेस्रा कागजमा लेखिएको रहेछ-
‘भारतीय सारी किन्दिऊँ भने मुखै बाङ्गो ।
हङकङ बैंककको किन्दिऊँ भने आफैं नाङ्गो ।।’
यस्ता मानसिक पीडाले समाजमा गंगारामलाई मात्र सताएको छैन । ०३४/३५ सालतिरको कुरा हो इन्जिनियरिङ कलेजमा ५ वर्ष एउटै कक्ष्ाामा पढेका साथी र मेरो कार्यालय जाँदा प्रायः रत्नपार्कमा भेट हुन्थ्यो । उनी र म नङ र मासुजस्तै मिल्थ्यौं । उनी आफ्ना तीता-मीठा कुरा मलाई सुनाउँथे । एक दिन श्रीमतीले भन्छिन्- ‘तिमी केको इन्जिनियर, इन्जिनियरको त बंगला हुन्छ, कार हुन्छ, तिमीसँग त एउटा साइकल पनि छैन ।’ श्रीमतीको कटु वचनले हृदयमा ठूलो चोट लाग्यो, उनको मन छिया-छिया भयो ।
श्रीमतीको अनावश्यक इच्छा पूर्ति गर्न साथीले जीवनमा पहिलोपटक छ हजार रुपैयाँ घूस खाए । उनका हाकिम तत्कालीन प्रधानमन्त्री नजिकका थिए । ठेकेदारले आफूले घूस दिएको तथ्य हाकिमलाई बताइदिएछ । साथीमाथि घूसखोरीको कारबाही हुने भयो । पानीबिनाको माछाजस्तै छटपटाउन थाले उनी । न रातमा निद्रा न दिनमा भोक । दिन बित्दै गयो, महिना बित्यो । मानसिक रूपमा उनी बिक्ष्ािप्त बन्दै गए । फाट्टफुट्ट बेसुरको कुरा गर्न थालेपछि उनलाई सुटुक्क राँची अस्पताल पुर्‍याइयो । उपचारको दौरानमा आफ्नै कोठामा झुन्डिएर आत्महत्या गरे उनले । यसप्रकार श्रीमतीको बोलीको गोलीले श्रीमान्हरू सदाका लागि भुइँमा ढलेका छन्, माटोमा मिसिन पुगेका छन् ।
०१८ सालमा त्रिपुरेश्वर घरेलुबाट मेरा आफ्नै दाजु पाल्पाको घरेलुमा शाखा प्रमुख भएर गए । आफ्नै शाखामा कार्यरत युवतीमाथि आँखा गड्यो उनको । फलस्वरूप १०/१२ वर्षभित्र चार छोरी र एक छोरा जन्मिए । एक दिन घरमा मामुली ठाकठुक पर्‍यो । घरमा बच्चा छाडेर भाउजू माइती गइन् । कसलाई थाहा थियो र उनी कहिल्यै नर्फकने गरेर उता गएकी हुन् भनेर । छ महिना पछि भाउजूले अर्कै श्रीमान् रोजिन । यता दाजुले सबै लालाबालालाई हुर्काए, छोरालाई अंश दिए, पढाए, लेखाए, बेलायत पठाए । सबै छोरीलाई आफ्नै हातले विवाह गरिदिए । विवेक र करुणाले भरिएर अनन्त क्ष्ाितिजमा फैलिएको पुरुषको विशाल हृदयलाई नारीले कहिले बुझ्ने ?
लुमन्ती बहिनी ! तपाईंले त केवल श्रीमान्का कारण टाउकोमा चोट, आँखामा रगत जम्ने गरी घोचेको, ओठमा टाँका लगाएको तर औषधि उपचार गरे निको हुने घाउको दुःख व्यक्त गरिदिनुभएको रहेछ । मेरो दाजुको घटना सुनिसकेपछि श्रीमतीले श्रीमान्लाई कहिल्यै निको नहुने गहिरो मानसिक घाउ पार्दारहेछन् भन्ने सत्य स्वीकार्न सक्नुहुन्छ ?
तपाईंले लेखमा सौताको कुरा उठाउनुभएको रहेछ । मेरो आफ्नै ब्यथा पोख्छु यहाँ । घटना ०४१ तिरको हो । क्यानेडियनहरूले नेपालगन्ज कागज उद्योगको डिजाइन एवं अध्ययनमा मलाई संलग्न गराए । क्यानेडियनको कार्यालयमा एक युवती सेक्रेटरी पदमा काम गर्थिन् । उनले मेरो रिजनल कलेजबाट डिस्टिङसनसहित उत्तीर्ण सिभिल इन्जिनियरिङको स्नातकोत्तर उपाधिको फोटोकपी कार्यालयको दराजमा राम्ररी राखेकी थिइन् । तीन महिनाभित्र मलाई आफ्नै हातले गनेर मैले काम गरेबापत पाउने रकम ११ लाख रुपैयाँ बुझाएकी थिइन् । अफिसमा जाँदा चिया दिएर उनी मलाई मीठा-मीठा कुरा गरेर निकैबेरसम्म अलमल्याउँथिन् । उनी मेरो विद्या र पैसा कमाउने क्ष्ामताबाट अतिशय लालायित भइसकेकी रहिछिन् । मलाई पत्तै भएन । उनले एक दिन दिलको कुरा यसरी पोखिन्, ‘म मुटुभरिको माया दिन्छु, मर्दकी १२ वटी हुन्छन्, म एउटीलाई आश्रय दिएर हजुरलाई के फरक पर्छ र ?’ मैले उनलाई घरमा श्रीमती भएको बताएँ । तैपनि बारम्बार टेलिफोन गरिरहन्थिन् । पछि मेरी श्रीमतीले उनको सातो लिएपछि बल्ल थन्किएर बसिन् । लुमन्तीजी सुख शान्तिले बसेका घरमा सौता बनेर राँको लगाउन को जाँदोरहेछ ?
अचेत हुँदासमेत श्रीमान्ले वस्तुसरह प्रयोग गर्छन् भनेर लेख्नुभएको रहेछ । चाणक्य नीतिमा नारीहरू पुरुषभन्दा ६ गुणा साहसी र आठ गुणा कामी हुन्छन् भनेर लेखिएको छ । ती नारी सचेत हँुदा आठ गुणा काम बासना बढी भएकाले श्रीमान्लाई कति सताएका होलान्, यो सत्य लेख्न किन बिर्सनुभएको ?
यही समाजमा श्रीमान् एसएलसी पास मात्र, श्रीमती बीए पास जागिरे र रूपकी धनी पनि । श्रीमतीले हरदिन दैनिक घरायसी कार्य गराउन युद्ध हारेको जर्नेलजस्तो मौन बनाएर आफ्नो सामुन्ने उपस्थित गराउँथिन् श्रीमान्लाई । घरधन्दा बालबच्चा श्रीमान्कै थाप्लोमा हालेकी थिइन् तिनले । एकाध बच्चा श्रीमान्को होला, बाँकी बच्चाको त श्रीमान्ले न्वारनमात्र गरे । बाली लगाउने अर्कै छ । हरपल अन्तर वेदनामा डुबेर धर्तीमा जीवनयापन गर्न विवश थिए ती विचरा श्रीमान् ।
यसरी बाटो बिराएर हिँडेका नारीलाई कसले सुमर्ने ? कसले तह लगाउने ? कहाँ छ देशमा कानुन ? कहिले बन्छ, कसले बनाउने ? जुनसुकै सरकार आए पनि फरियामुनि गुम्सेर बसेका छन् । नारीकै पक्ष्ामा डम्फु बजाएर भजन गरिरहेछन् ।
– डा. कृष्णबहादुर रानामगर
0 thoughts on “नारीकै पक्षमा डम्फु – डा. कृष्णबहादुर रानामगर”
“अस्ति एउटा दलितले मन्दिर छिर्न नदेको निहुमा बाहुनलाई मर्ने गरि पिटेछ ।
अनि एउटा मज्दूरले तलब नदेको झोंकमा आफ्नो मालिकलाई बेस्कन गोदेछ ।
यसरी बाटो बिराएर हिँडेका दलित मज्दूरलाई कसले सुमर्ने ? कसले तह लगाउने ? कहाँ छ देशमा कानुन ? कहिले बन्छ, कसले बनाउने ? ”
यस्तो नि कुरा गर्ने हो ?
‘घटना’ अनि ‘प्रवित्ति’ छुट्टाउन नसक्ने कुन उल्लु लेखक हो यो डा. कृष्णबहादुर रानामगर भन्ने ??
girls, cmo’n u are dead? you talk about nakedness in your friend’s article but do not comment here.
Maane Dr. saa’b ko Article best..sabai bhanda. Ho ni Imanadar bhayera kaam garna garho chha jaba samma nari maanasikta Phariya Rat lagaairahane ho bhane,.